राष्ट्रपति कार्यालयलाई १८ करोडको गाडी किन्न भनि युवाहरुले भिख मागेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयलाई १८ करोडको गाडी किन्न भनि युवाहरुले भिख मागेका छन् । राष्ट्रपतिलाई गाडी खरिद गर्न भन्दै पशुपतिमा आउनेहरुसँग १ रुपैयाँ भिख मागेर रकम संकलन गरिएको छ । उठेको रकम गाडी खरिद गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने आयोजकको योजना छ ।
सरकारका प्रवक्ताले भने राष्ट्रपति कार्यालयको बचाउ गर्दै १८ करोड केवल एउटा गाडीका लागि होइन थुप्रै गाडी, एम्बुलेन्स, बाइकका लागि हो भनेका छन् । एम्बुलेन्स कति करोडको हो ? बाइकहरु कति करोडका हुन् ? र राष्ट्रपतिको गाडी कति करोडको हो ? भनेर ब्रेकडाउन गर्न आजसम्म सरकारले सकेको छैन ।
१६ करोडमा ४ करोड बाइकहरु र एम्बुलेन्सलाई भए १२ करोड चाँही राष्ट्रपतिको गाडीलाई नै पर्ला । यति धेरै विवाद मात्र होइन राष्ट्रपतिका लागि भिख नै माग्न थालिसके पछि किन मौन बसेको होला राष्ट्रपति कार्यालय ?
सरकारका प्रवक्ताले राष्ट्रपति कार्यालयको लाज ढाक्न त खोजे तर एउटा ज्यादै सानो टालोले यति ठुलो लाज ढाक्न त के सक्थ्यो, ह्वाङगै देखियो । हामी जनताको पनि भाग्य नै खोटो छ । आफ्ना गाडी बेचेर सरकारी कोषमा जम्मा गरिदिने पाकिस्तानका इमरान खानको तारिफ गर्नु प¥या छ । साइकल चडेर कार्यालय जाने नेदरल्याण्डका प्रधानमन्त्रीको वाह वाही गर्नु प¥या छ । इकोनोमी क्लासमा यात्रा गरेर, समाज सेवामा आँफुलाई सम्मिलित गर्ने क्रोएसियाकी राष्ट्रपतिको गुणगान गाउनु परेको छ ।